LinkedIn mandefa fanavaozana tohanan'ny | Martech Zone
Talata, Aogositra 20, 2013 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
LinkedIn dia fitsapana ireo fanavaozana tohanan'ny miaraka amin'ny orinasa toa Hubspot, Adobe, Lenovo, Xerox ary American Express… izao dia nosokafan'izy ireo ho an'ny rehetra. Ity dia fomba iray mahomby ho an'ny orinasa B2B hamantatra sy hikendrena ireo vinavina amin'ny ezaka marketing amin'ny atiny ao amin'ny LinkedIn.
soa azo avy amin'ny Vaovao farany tohanan'ny LinkedIn
Manentana ny fahatsiarovan-tena sy ny fahitana endrika - vahaolana amin'ny marketing amin'ny fampitomboana haingana ny fahatsiarovan-tena sy ny famolavolana ny fahatsapana ny marika, vokatra ary serivisinao.
Fitarihana kalitaon'ny fiara - Miteraha fitarihana kalitao amin'ny fizarana hevi-baovao tadiavin'ny matihanina. Topazo maso ny atiny niely tamin'ny alàlan'ny fizaràn'ny mpiara-mianatra izay mitranga voajanahary ao amin'ny LinkedIn.
Manorina fifandraisana - Avoahy miaraka amin'ny Fanavaozana Voaroaka ny votoatinao mba hamoronana lanja sy hametrahana fitokisana izay miteraka resadresaka mitohy sy fifandraisan'ny mpanjifa lalina kokoa.
Ny fanavaozana tohanan'ny LinkedIn dia mampifantoka ny sainao hiverina amin'ny pejin'ny orinasanao LinkedIn ka aza hadino izany manana amboaran'ny pejy Company raha tsy mbola nataonao.
Tags: fampiroboroboana ny atinyLinkedInfanavaozana tohanan'ny Linkindokam-barotra karamafanavaozam-baovao tohanan'ny mpanohana